PressReader - Kwayedza: 2018-11-23 - Batsiraiwo Mufaro Chanditeya
Kwayedza - 2018-11-23 - Denhe Reruzivo - Muchaneta Chimuka
VABEREKI vemwana mukomana ane makore 14 okuberekwa uyo ane dambudziko rekuoma mitezo avo vanogara kuMbare National, muHarare, vari kutsvaga rubatsiro rwekuti akwanise kuenda kuchikoro chevakarem­ara.
Mufaro Chanditeya — uyo anonzi akatanga kuoma mitezo aine makore mana okuzvarwa —anoda rubatsiro rwekuti akwanise kuenda kuzvikoro zvevana vakaremara, sepaTose Respite Care Home iri kuProspect, muWaterfal­ls, muHarare.
Baba vake VaDominic Chanditeya (53) vanoti vari kushaya pekutangir­a nekuda kwedambudz­iko rine mwana wavo.
“Mwoyo wangu wange uchida kuti kudai mwana awana nzvimbo paTose Respite Care Home kuitira kuti akwanise kufunda nevamwe uye kuitiswa mitambo inosimbisa muviri sezvo mitezo yake iri kungoramba ichioma. Ndakamboed­za kumuitisa mitambo iyi ndiri kumba akatozotyo­ka gumbo uye izvi ndaizviita nekushaya mari yekufambis­a kuti ndimuendes­e kuHarare Central Hospital.
“Dambudziko riri pamwana uyu rinoda nyanzvi nekuti kutaura kudai hapana kana chaachakwa­nisa kuita, paunenge wamusiya ndipo paunomuwan­a ari. Chikafu tinotoita zvekuchisw­ededza pahuro nekuti chero ukamuisa mumukanwa haakwanisi kuchimedza oga,” vanodaro.
VaChandite­ya vanoti mwana uyu akabarwa asina dambudziko asi paakangosv­itsa makore mana nechidimbu okuberekwa, ndipo paakatanga kuoma mitezo.
Vanoti ivo vanoshanda saMaintena­nce Contractor asi pari zvino mabasa acho ndiwo asiri kubatika kuti vakwanise kurapisa mwana wavo
pamwe nekuririti­ra mhuri uye mudzimai wavo haashande.
“Pamazuva azvakatang­a, ndaimbowan­a mabasa saka ndaikwanis­a kuendesa mwana kuchipatar­a achinobats­irwa nekuitiswa mitambo inosimbisa muviri uye mapiritsi ekuti asagwinha. Pari zvino, nhamo yandimomot­era saka ndiri kukundikan­a kuwana $20 chaiyo yekufambis­a kuti ndiende naye kuchipatar­a.
“KuTose Resipite Care Home ndinoona kuchizobat­sira mwana asi pandakambo­endako vaiti panodiwa mari uye munhu anoswera naye achiona zvinodiwa paari pamazuva ekutanga,” vanodaro.
Vanoti mwana wavo anokwanisa kumedza chikafu chakareruk­a sebota, mabanana, nyama nembatatis­i zvakagaiwa.
Vanoendere­ra mberi vachiti, “Amai vake havachakwa­nisi kuenda kukereke kana kushanya nekuti vanofanirw­a kunge vainaye pamba nguva dzose. Anoda mapamba kana manapukeni sezvo asisagona kuzvibatsi­ra oga.”
Vangada kubatsira Mufaro vanokwanis­a kufonera baba vake panhamba dzinoti: 0773212586, 0772580839, 0738480112 kana kuisa mari muakaundi yaDominic Chanditeya yeFBC Bank inoti 6017041001­851429.
Mufaro Chanditeya naamai vake Majorie Masango asati abatwa nedambudzi­ko.